Na dia nisy aza ny fitsipika momba ny fidirana amin'ny tranokala nandritra ny taona maro, dia niadana ny famaliana ny orinasa. Tsy mino aho fa resaka fiaraha-miory na fangorahana eo amin'ny lafiny orinasa… Mino aho fa ny orinasa dia sahirana amin'ny manaraka. Ohatra, Martech Zone ambany toerana noho ny fahazoana miditra. Rehefa nandeha ny fotoana dia niasa nanatsara ny fikajiana sy ny famolavolana ary ny metadata ilaina… aho saingy sarotra ny manaraka ny fitazonana fotsiny
Vao haingana izahay no nizara lahatsoratra misy ohatra 6 momba ny fampivoarana ny teknolojian'ny varotra sy ny varotra ary ny iray amin'ireo fomba dia ny fanitsiana sary. Maro amin'ireo mpaka sary ampiasainay hanaovana sary matihanina, sarin'ny vokatra, ary sary hafa ho an'ny mpanjifanay no manam-pahaizana amin'ny Photoshop ary manao asa tena tsara. Na izany aza, raha tsy mahafehy sary sy fanovana sary ny asanao manontolo andro, ny sehatra tsy mampino an'i Adobe dia manana curve fianarana mideza. Luminar